Kwinqaku yethu ethi "Kutheni kubangele i-lymph nodes" uya kufumanisa: ziphi i-lymph nodes nokuba kutheni zikhula. Ngomkhuhlane wesifazane obuthathaka, ukunyuka kwama-lymph node kunokubangelwa yintlungu, apho apho itywina ifumaneka khona ngasemva kwesihlunu (umzekelo, ingalo yachithwa). Ingozi kakhulu kule meko i-scratch efunyenwe kwikati - umthengisi we-microbe "esebenzayo" - iBartonella, ehamba ngqo kwi-node kwaye ingabangeli nje ukunyuka kwayo, kodwa igalelo lokuvutha.
Ngentsholongwane efanayo, i-lymph nodes ibuhlungu, inokuthi "isitofu", vula obomvu uze ufumane i-pussy phezulu. Iimpawu zolu bushushu obushushu, intloko, ubuthathaka. Le yimeko enobungozi, efuna zombini unyango lwangaphakathi kunye jikelele kunye nonyango oluphuthumayo.
Ukunyuka kwama-lymph nodes kwizifo ze-venereal ziqhelekileyo. Ngezi zifo, i-nucleus "i-inguinal" ikhula ngokuthe kratya, ephantse ingazange ibuhlungu. Ukuqinisekiswa kokuzifumanisa ngokuzenzekelayo kungenziwa ukwakheka kwe-pimple (chancre) eqinileyo kwizitho zangasese. Mhlawumbi, akukho imfuneko ukukhumbuza iingxaki ezinobungozi zezifo ze-venereal, ezi zilula kwaye ziphathwe ngempumelelo.
Ukuvuvukala kwama-lymph nodes kuhambelana nezifo ezininzi ze-oncological. Nanku umlinganiselo obalulekileyo wokuxilonga ubukhulu obukhulu beendawo (ngaphezu kwe 3-4 cm) kunye nokungabikho kwentlungu kunye nobukhulu babo. Ngokuphathelele "i-geography", ngenxa yomhlaza wesifo se-thyroid kunye nezitho zomlomo womlomo - ezi ziyi-lymph node, zino-oncology ye-rectum kunye ne-genitourinary organism - inguinal and popliteal, izifo zentlungu yamanyam
Ziziphi i-lymph nodes?
Ukongeza kwenkqubo yokujikeleza, equkethe i-capillaries ngegazi, sinakho "inkqubo efanayo" ebizwa ngokuthi "lymphatic", kwiimpahla apho kukho enye i-lymph. Umsebenzi wayo kukuba "uqokelele" kwiisisu zomzimba kwaye "ulungelelanise" zonke izinto ezinobungozi nezingozi kwimpilo (kubandakanywa neeseli zomhlaza). Kwezinye iindawo zomzimba wethu, i-capillaries ene-lymph "idibaniswe" kwaye yenze uhlobo lwenqabiseko "oluxanduva" lokukhusela le nxalenye yomzimba.
I-lymph nodes ziphakathi komntu (kwisisu, esifubeni kunye nasemigodini yegazi), kunye nakwiindawo ezifikeleleke kwamehlo ethu: entanyeni, occiput, kwi-armpits, i-elbows kunye ne-knee folds, indawo ye-inguinal.
Ukwanda kwiphina i-lymph node kuthetha ukuba i-immune system isebenza ngentsingiselo kule ngxaki yomzimba apho kubonakala khona le nkathazo. Yaye le ngxaki idla ngokukhawuleza. Into emele yenziwe kulo mzekelo ukuya kumgqirha, ngaphambi kokutyelela apho ungenakukwenza oku kulandelayo: cinezela kwi-lymph nodes, uzihlambele kwaye usebenzise ukunyanzelisa (kokutshisa nokubanda). Khumbula, konke oku kungenakho ukungabikho kwezifo kunokukhokelela ukwandisa kunoma iyiphi i-lymph node ephilileyo!
Ukongeza kwenyuka kwi-lymph node, intlungu ingaba okanye ayikho. Kule meko, intlungu ibonisa ukuba i-lymph node ngokwayo ichaphazelekayo, kwaye ukungabi khona kwayo kukuba isifo sisendaweni ethile kufuphi nayo.
Ukuvuvukala okungenakubuhlungu kweempawu ze-lymph, ikakhulukazi, izifo ezithathelwanayo. Ukunyuka kwexesha elifutshane kubonisa ukuba isifo sele sisiwe, ngoko ke, kunokwenzeka ukuba akukho nto ebangela ukukhathazeka. Ukwanda kwexesha elide kunokuhamba no-SARS, umqala womlomo, i-otitis, i-sinusitis kunye ne-caries. Kule meko, i-lymph nodes entloko nasentanyeni yanda, nangona kunjalo, xa kuziwa kubantwana (bane-immune system "engaziqeqeshelwa"), i-lymph nodes ezinkulu zingatholakala kwezinye iindawo.
Ukuphuma kwimihla yokuqala: unyango kunye nokutya
I-Thrombophlebitis yamacandelo aphantsi
Asia Beauty SPA inikezela
Ukugqiba ukulahlekelwa kwindlebe: unyango
Isisu esisezantsi kunye neengcambu ezisezantsi: izibangela, iimpawu, iimpawu ezikhethiweyo zekliniki kumadoda nabasetyhini
Hypochondria: ukugula okanye isimo sengqondo?
Ilayiti yelayisi kunye nama-strawberries kunye ne-yogurt
Uphuhliso lwabantwana bokuqala
Ukungaqhelekanga kwintombi eqaqambileyo: Umthombo wentsuku ye-SoEasy Secret Garden
Yintoni endiyenzayo ukuba ndibe nomfanekiso omhle?
Iipancakes ngeeshizi zebhokhwe
Konke malunga ne-cellulite ukusuka kwindawo yokujonga ngonyango
Ukunciphisa amafutha abalulekileyo, ukuziqhelanisa
UMargarita Agibalova waphendula ngokugxekwa kokubonakala kwakhe
Iinqunqa zemifuno ezivela kwiifatates kunye nezigulane
Kutheni amantombazana abanako ukudibana nabanye abantu abayithandayo?